चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा एम्बुलेन्स खरिद - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › स्वास्थ्य ›
| १९:५९:५८ मा प्रकाशित
१५ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका प्रवेशद्वारमा रहेको सो नगरपालिकाले नगरवासीलाई स्वास्थ्य संस्थामा आवतजावतको सहजताका लागि आज एम्बुलेन्स खरिद गरेको हो ।
टाटा कम्पनीले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एम्बुलेन्स चन्द्रागिरिले विशेष छुटका साथ रु १० लाखमा खरिद गरेको नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरिले जानकारी दिए । खरिद गरिएको एम्बुलेन्स नगरपालिकाको मातहतमा सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । एम्बुलेन्स खरिदसँगै नगरपालिकाभित्रका बिरामीले राहत पाउने भएका छन् ।
नगरपालिकाले चन्द्रागिरीभित्रका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाको ८ नं वडामा १५ श्ययाको नगरस्तरीय अस्पतालसमेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । पछिल्लो समयमा जुनसुकै एम्बुलेन्सले कोभिड–१९ का बिरामी बोक्न नमानेको अवस्थामा चन्द्रागिरिले नगरमा सञ्चालन गर्नका लागि एम्बुलेन्स खरिद गरेको हो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले दमकलसमेत खरिद गर्ने भएको छ । चन्द्रागिरिले नगरपालिकाभित्र आवश्यक पर्ने दमकल, एम्बुलेन्स र नगर प्रहरी भ्यान खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ७० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । नगरप्रमुख गिरीले चन्द्रागिरिमा हुनसक्ने आगलागीका घटना तत्काल नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने दमकल खरिद लागेको बताए ।
यस्तै, नगरपालिकाले नागढुङ्गादेखि कलङ्कीसम्म आकाशे पुल निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले चन्द्रागिरिको मुख्य सडकमा हुने दुर्घटनामा कमी ल्याउन आकाशे पुल निर्माण गर्न लागेको हो । नगरपालिकाले काठमाडौं भित्रिने प्रमुख स्थान नागढुङ्गामा प्रवेश द्वारसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । प्रवेशद्वार निर्माणका लागि नगरपालिकाले रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । वाग्मती प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो यस नगरपालिकामा १५ वडा रहेका छन् ।
के वन किक बक्सिङमा हिमालयन चितुवा भिड्दै १ महिना पहिले
चन्द्रागिरिमा ‘म नै बनाउँछु, मेरो लागि अस्पताल’ अभियान १ महिना पहिले
चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा १० लाखमा एम्बुलेन्स खरिद २ महिना पहिले
बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु २ महिना पहिले
पचास शय्याको अस्पतालमा एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामी बोक्न स्ट्रेचर र डोको २ महिना पहिले
कोरोना बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स चालकलाई थप प्रोत्साहन भत्ता ३ महिना पहिले
कोरोनाविरूद्धकाे खाेप नेपालमा २ मिनेट पहिले
नेपाललाई काेराेना खाेप दिए लगत्तै भारतको महाराष्ट्रमा लाग्याे आगाे ! ११ मिनेट पहिले
७२ विद्यालयमा एकैदिन, एकैपटक चुनिदै व्यवस्थापन समिति ४३ मिनेट पहिले
शताब्दी पुरुष जोशी बिरामी, खाना खान र सुत्न असहज ५ घण्टा पहिले
संसद विघटनको विरोधमा कांग्रेसले आज वडास्तरमा प्रदर्शन गर्दै ९ घण्टा पहिले
प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी समितिको बैठक पेरिसडाडामा शुरू ६ दिन पहिले
कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको खुर्कोट–दाना खण्डको अन्तिम परीक्षण हुँदै ६ दिन पहिले
चार वटा क्षुद्रग्रहलाई अस्थायी नाम दिइयाे ६ दिन पहिले
आगामी माघ १५ देखि स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने ३ हप्ता पहिले
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूको भाेली कोरोना परीक्षण गरिने ३ हप्ता पहिले
आज पनि ओली र दाहाल-नेपाल समूहको बैठक बस्दै ४ हप्ता पहिले
इजरायलकाे श्रम बजारमा नेपाली कामदार लैजाने बाटो खुल्याे ५ घण्टा पहिले
कामदारका नाममा नक्कली फर्म, ६५ करोडको भ्याट छली २ हप्ता पहिले
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एक साता सर्‍यो २ हप्ता पहिले
पहिरोका कारण १५० घरघुरी जोखिममा ७ महिना पहिले
साझा पार्टीले भन्यो, जनतालाई पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो ! ३ महिना पहिले
भ्रमण बर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै काठमाडौंमा आर्किटेक्चरल सम्मेलन हुँदै १ वर्ष पहिले
पहिरोले घर बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु ६ महिना पहिले